bhimphoto: September 2016
दुइ महिनादेखि घाँटी झमझमाउने, कहिलेकाही जरो आउने भएपनि रातिको चौकीदारीको काम गरिरहेका ६१ वर्षीय कुलबहादुर परियारलाई निकै गाह्रो भएर आयो । उनले चौकीदारी गर्ने रेस्टुराकी सञ्चालिका र परिवारले 'उपचार गर्न अस्पताल जानुपर्छ' भनेपछि उनी आइतवार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पुगे ।
करीब आधा घण्टा लाइन लागेर २५ रूपैयाँको पूर्जि बनाए, डेढ घण्टा पालो कुरेपछि हाडजोर्नी विभागका डाक्टरलाई आफ्नो शिकायत बताउन पाए । डाक्टरले पूर्जीमा 'एक्स-रे' लेखिदिएपछि काउन्टर फिरेर लाम लागे । शुल्क चार सय बुझाए र, 'एक्स-रे' शाखामा पुगे । त्यहाँको पालोमा चार घण्टा बसे । रिर्पोट हात परेपछि उनले देखाउन चाहेको हाडजोर्नी विभाग बन्द भइसकेको थियो । 'डाक्टर गइसकेछन् । देखाउन पाइएन', साँझ अस्पतालबाट घर फिरेका उनले भने, 'म विहान १० बजे पुगेको । यति धेरै पालो कुर्दाकुर्दै रिर्पोट हातमा आउँदा फेरि देखाउँनै पाइएन ।' स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी ६ का परियार धेरै वर्षघि पोखरा झरेका हुन् । उनले केही परे उपचारमा जान सजिलो क्षेत्रीय अस्पताल हो । तर, विरामीको चापले उनीजस्ता धेरैलाई शुल्क बुझाउने, पूर्जी बनाउने, रिर्पोट लिने र पुनः चिकित्सक भेटेर उपचार गराउन सजिलो छैन । आइतवारै अस्पतालमा अढाइ वर्षे छोरीलाई जरो आएपछि जँचाएर फिर्दै गरेका मुस्ताङचोकका देवीरमण तिवारीले भने 'पूर्जी बनाउन लाइन, डाक्टरलाई देखाउन लाइन, औषधि किन्न लाइन । अरु त अरु डाक्टरलाई दोहोरो बोल्नसमेत फुर्सत नभएको देख्दा ठीक लाग्दैन ।' छोरीको जरो ननापी, नजाँची परैबाट हेरेर पूर्जीमा औषधि लेखिदिएपछि 'केके खुवाउनु हुन्छ, केके हुँदैन' सोध्दा जवाफै नपाएको गुनासो उनले गरे ।
तिवारी र परियार उपमहानगरभित्रै बस्छन् । यिनीहरूबाहेक पनि क्षेत्रीय अस्पताल पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा विरामी उपचारका लागि आइरहने थलो हो । उपमहानगरमा दुइवटा मेडिकल कलेज छन् । निजी क्षेत्रका अस्पताल र उपचार केन्द्र दुइ दर्जनको हाराहारीमा रहेपनि क्षेत्रीय अस्पताल मध्यम र निम्न वर्गीयका लागि उपचारको पहिलो गन्तव्य रहिआएको छ । जहाँ निजी नर्सिङ होमहरू प्रसूति सेवा दिन्छन्, त्यही उनीहरूले शिशु भेन्टिलेटरमा राख्नुपरे क्षेत्रीय अस्पतालमै पठाउँछन् । तर, यहाँ विरामीको चापका तुलनामा सेवा प्रवाहको गति निकै ढिलो छ । बेडकै भर्ना हुनु नपर्ने खालका विरामी धेरैले पूर्जी बनाएकै दिन सबै जाँचका चरण पुरा गरि चिकित्सक भेटेर औषधि लिइ फिर्न पाउनु 'भाग्य चिठ्ठा' परेको मान्नुपर्छ ।
'कोशिश नगरेको भन्ने होइन । दिनको आठ सय हाराहारी विरामी उपचारका लागि आउँछन्, चापका तुलनामा सेवा छिटो दिनु गाह्रो छ', मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट श्रीकृष्ण श्रेष्ठले भने, 'ढिलो भयो भनेर गुनासो पनि आइरहन्छन् । सीमित जनशक्तिमा हामीले उपचार हतार हतारमा कसरी दिने ?' उनका अनुसार १४ वटा विभाग रहेको अस्पतालमा सरकारी दरबन्दी र करारका गरि ८२ जना चिकित्सक छन् । पाँच सय शैय्याको अस्पतालमा हाल तीन सय ५८ सञ्चालनमा छन् । 'पुरानो भौतिक संरचना जीर्ण भएका छन्', उनले भने, 'पर्याप्त बजेट छैन । सुविधा सकभर दिने कोशिश छ तर, विरामीको चापका तुलनामा हामीले सेवाभन्दा बढि गुनासो फेस गर्नुपर्छ ।' मातृ-शिशुका लागि नयाँ भवन निर्माणाधीन रहेकाले बनेपछि त्यससम्बद्ध विरामीलाई सहज हुने उनले बताए । अस्पतालले २ बजेपछि पूर्जीका अतिरिक्त शुल्क चार सय लिएर 'पेइङ क्लीनीक' सेवा दिएको छ । 'त्यो शुल्कमा आधा डाक्टर, २५ प्रतिशत अस्पताल र २५ प्रतिशत सम्बद्ध कर्मचारीको तलबमा जानेगरि धान्नु परेको छ', उनले भने, 'सामान्य ओपीडीको समयमा नभ्याउने विरामीका लागि त्यो सेवा हो तर, सबैका लागि छिटो र सहज सेवा भीड भएकाले पनि गाह्रो छ ।'
२०१२ सालमा सैनिक अस्पतालबाट सुरु भएको सेवा २०१९ मा जिल्ला, २०३२ मा अञ्चल र २०४३ मा मुलुककै पहिलो क्षेत्रीय अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति भएको थियो । स्तरोन्नति त्यतिकै थामिएको भने छैन । यो क्षेत्रीय अस्पताल हाल नामका लागि व्यवस्थापिका संसदबाट गत पुसमा पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान हो । तर, यहाँ न उपकुलपति नियुक्ति भएको छ न कुनै संरचना निर्माण र शैक्षिक क्रियाकलाप सुरु भएको छ ।
यहाँका एमाले नेता तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको बलमा प्रतिष्ठानमा नाम परिणत भएपनि कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम र योजना अस्पतालको हात लागेको छैन ।
सरकारले अघि सारेको सबै क्षेत्रमा एक/एक प्रतिष्ठानको नीतिअनुसार यहाँ योजना आए पोष्टग्राजुयट अर्थात मास्टर डिग्रिमा डक्टर इन मेडिसिन (एमडी) र र्सजरी (एमएस) को पढाइ हुनुपर्ने हो तर, अस्पताल अहिले पनि उपचारबाहेक अध्यापन र परियोजनाको कुनै कार्यक्रममा अघि बढ्न सकेको छैन । अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष रामनाथ पराजुलीले भने 'सरकारले उपत्यकाका अस्पताललाई दिने बजेट र बाहिरका अस्पताललाई दिनेमा जहिल्यै विभेद गरेको छ । कसैलाई ५० करोड, कसैलाई मुश्किलले आठ करोड !' अस्पतालको स्तरोन्नति सरकारको नीतिसँग जोडिएको उनले बताए । 'प्रतिष्ठानमा परिणत भएपछि अब विकास समिति खारेज भएको अवस्था हो तर, नाममात्रै फेरिएको छ, अरु केही फेरिएन', उनले भने, 'दरबन्दीका सबै स्वास्थ्यकर्मी संख्यामा पुग्दैनन्, विकास समितिले राखेकाहरूलाई खर्च पुर्‍याउनै गाह्रो छ ।' अघिल्ला वर्षसम्म अस्पतालले आम्दानीबाट केही खर्च जोगाएर संचिति राख्ने गरेको भएपनि यो वर्ष तलबमा गरिएको २५ प्रतिशत बृद्धि विकास समितिलाई धान्न गाह्रो रहेको उनले बताए । 'सबै भवन, संरचना पुराना छन्, ५०/६० वर्ष पुरानोले कहिलेसम्म धान्छ', उनले भने, 'नयाँ पूर्वाधार थप्ने, जनशक्ति बढाउने आदि समयको मागलाई अस्पतालले थेग्न गाह्रो छ ।'
(३२ साउन २०७३ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 4:53 PM
‘गाउँमा नब्बे काटेको मियाँ बूढो खोज्नुभो भने सबैले मलाई देखाउँछन्,’ ताप्लेको बजारचोकमै घाम ताप्दै गरेका मन्सुर अलीले भने, ‘९६ पुगें, म जतिकै उमेरको अर्को मियाँ बूढो भेटेको छैन ।’
वृद्धभत्ता आउँदा लिन जान्छन्, योबाहेक नब्बे नाघेपछि उनी परिश्रम पर्ने काम गर्दैनन्। ‘तन्नेरी बेलामा डोकामा चुरा बोकेर पहाडका गाउँ–गाउँ डुलियो,’ उनले भने, ‘मजस्ता धेरै पुराना चुरौटेका सन्तान अहिले यो पेसै गर्दैनन् ।’ तन्नेरी उमेरमा चुरा बेच्दै हिँडेका स्मृति अब उनका लागि सम्झँदाको रमाइलो सपनाजस्तो भएको छ ।
‘अब समय फेरियो’, उनले सुनाए, ‘अचेलका पुस्ता मिहिनेत धेरै पर्ने काम गर्दैनन्, सजिलो पेसा खोज्छन् ।’ पुरानो पेसाको साटो नगन्य परिवारले शृंगार सामग्रीको पसल चलाइरहेछन् । धेरै परिवारका नयाँ पुस्ता वैकल्पिक पेसामा गएको उनले बताए । मन्सुरका छोराबुहारी दिवंगत भए। तीन भाइ नाति छन् । नाति पुस्ताका कोही पनि चुरा बेच्ने काम गर्दैनन् ।
ताप्ले–४ का अब्दुल रहिम मियाँका छोराबुहारी धादिङको सिम्लेमा शृंगार सामग्रीको पसल चलाउँछन् । ‘बाउपुर्खाले गरेको पेसा सबै जातिका नयाँ पुस्तामा फेरिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘अब त चुरौटेका कुरा हाम्रा नाति पुस्ताका लागि रमाइलो कहानीजस्तो भएको छ।’ पहाड खन्दै बनाइएका सडकसँगै सवारीसाधन पुग्दै जाँदा नयाँ पुस्ताले पढ्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने र स्थानीयस्तरमै काम गरे पनि पसल चलाउने वा अन्य रोजगारीका पेसा गर्न थालेको उनले बताए। ७२ वर्षीया जमुनी खातुन भन्छिन्, ‘चुरौटेका कुरा अब कथा भए। नयाँले चुरा बेचे पनि पसल खोल्छन्, डुल्दैनन्।’
८२ वर्षीय नूर महमद मियाँका चार छोरी विवाहपछि ज्वाइँका घर गए। एउटा छोरा अल्पायुमै बित्यो। श्रीमतीको पनि निधनपछि उनी १२ वर्षदेखि एक्लै छन्। ‘हाम्रो तन्नेरी बेलाको एउटा पेसा चुरा बेच्ने त हो, तर खास पेसा कृषि हो भन्छु,’ उनले भने, ‘म अझै बारी खनिखोस्री गर्छु। अनि त अहिलेसम्म ज्यान केही भएको छैन। चुरा बेचेका जमानाका कुरा अब भुरालाई सुनाउने कथा भइसके ।’
ताप्लेकै ७१ वर्षीय जुम्मदिन मियाँका दुई छोरामध्ये कसैले पनि चुरा बेच्ने काम गरेनन्। ‘डोको बोकेर आफूले त चुरा बेचेकै हो, पहिले बाटोघाटो अप्ठ्यारा थिए, घामपानी खप्दै भारी बोकेर हिँड्ने पेसामा जति आर्जन हुन्थ्यो, त्यति नै मिहिनेत पनि पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेका पुस्ता त्यस्तो काम गर्न चाहँदैनन् ।’ जेठो छोरा १४ वर्ष कतारमा काम गरेर घर फिरेको सुनाउदै उनले थपे, ‘उसले अहिले चितवनको हुग्दीखोलातिर पसल चलाएको छ, कान्छो छोरा पनि कतार गएर काम गर्न थालेको सात/आठ वर्ष भयो ।’ वृद्धावस्थामा आफूहरू एक्लाएक्लै परेको उनले बताए।
मुस्लिम इत्तेहाद संगठन गोरखाका अध्यक्ष समसुद्दिन मियाँका अनुसार समयसँगै पेसा फेरिँदै आएपछि जिल्लामा अब चुरा र शृंगारका सामान बेच्नेमा गैरमुस्लिम बढी भेटिन थालेका छन्। ‘जसरी नेपाली समाज फेरिएको छ, काम गर्न विदेश जाने लहर चलेको छ,’ उनले भने, ‘पहाडिया मुस्लिम समाज त्यो लहरभन्दा कुनै पनि रूपमा भिन्न छैन ।’ धर्म मान्ने तरिका फरक भए पनि रहनसहन र जीवनशैली अन्य जातजातिकै जस्तो रहेको उनले बताए । इतिहासअनुसार १७ औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट नेपाल पसेर स्थायी रूपमा बसोबास गरिआएका पहाडिया मुस्लिमको पेसा चुरौटेमात्रै नभएको उनले बताए । ‘धेरैले हाम्रो इतिहास नबुझेर चुरा बेच्नेमात्रै ठान्छन् तर, हाम्रा बाउपुर्खा हतियार, गोलाबारुद बनाउन सिपालु भएका कारण राजारजौटाले बोलाएर ल्याएका थिए,’ उनले भने, ‘पहाडिया मुस्लिमको पुरानो बसाइँ खोज्दै गए बाइसेचौबिसे राजाका पालामा हतियार बनाउन आएर बसेको भेटिन्छ । पछिल्लो पेसा कृषि र व्यापार हो।’
शाहवंशीय राजाका पालादेखि गोरखकाली मन्दिरमा मुस्लिमले शृंगारका सामग्री चढाउने चलन रहेको जनाउँदै धेरै पहाडिया मुस्लिम परिवारले चुराको व्यापार गरिआएको इतिहास अझै भेटिने उनले बताए । उनका अनुसार गोरखामा पहाडिया मुस्लिमको जनसंख्या चार हजार हाराहारी छ । आरुचनौटे, असराङ, ताप्ले र फिनाममा घना बस्ती छ । जिल्लामा रहेका १४ मदरसामध्ये चारवटामा छात्रावास सुविधा पनि छ। मुस्लिम समुदायका बालबालिका मदरसामा धार्मिक शिक्षा लिनेसँगै सामुदायिक विद्यालय पनि पढ्छन्।
ताप्लेस्थित महालक्ष्मी माविका प्रधानाध्यापक रहमतुल्ला मियाँका अनुसार नेपाली समाजभित्र पहाडिया मुस्लिम कुनै फरक समुदायजस्तो छैन। ‘जसरी समाज मिलेर बसेको छ, त्यसैगरी हामी सबै एकअर्काका लागि ढुंगाको भर माटो, माटोको भर ढुंगाजस्तो छौं,’ उनले भने, ‘भूकम्प आउँदा हामी सबैले मिलेर एकअर्कालाई सघायौं। स्कुलका लागि अस्थायी टहरो पनि बनायौं।’ धेरै अघि बाहिरी मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भट्टीमा गाल्दै चुरा बनाउने चलनबारे आफूले सुने पनि देख्न नपाएको उनले बताए।
‘म ती पुराना प्रविधि खोजी गरी यहाँको संग्रहालयमा राख्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘समयसँगै समाजमा सबै समुदायका पुस्ता–पुस्ता पेसा फरक पर्दै जानु स्वाभाविक छ। तर, कुनै खास ऐतिहासिक पेसाबारे नयाँ पुस्ताले जानकारी पाउने कुरा हामीले जतन गरिदिनुपर्छ।’
(गोरखाको ताप्ले पुगेर फिरेपछि लेखिएको । कान्तिपुर दैनिकमा १९ भदौ २०७३ मा प्रकाशित)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 12:22 PM